ထူးျခားေသာ အက်ိဳးေက်းဇူး ကံေကာင္းမႈေတြ အျမန္ ေရာက္႐ွိလာမည့္ ၁၅ မိနစ္ တရားထိုင္နည္း – WunYan
ထူးျခားေသာ အက်ိဳးေက်းဇူး ကံေကာင္းမႈေတြ အျမန္ ေရာက္႐ွိလာမည့္ ၁၅ မိနစ္ တရားထိုင္နည္း
တေန႔လၽွင္ (၁၅) မိနစ္ခန္႔ တရားထိုင္ၾကည့္ပါ။ ထူးျခားေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား၊ ထူးျခားေသာ ကံေကာင္းမႈမ်ား သင့္ထံသို႔ ဧကန္အျမန္ ေရာက္ရွိလာေပလိမ့္မည့္
အမ်ိဳးသားေယာဂီမ်ားမွာ တင္ပလႅင္ေခြထိုင္လွ်က္လည္းေကာင္း၊ အမ်ိဳးသမီးေယာဂီမ်ားမွာ မိန္းမထိုင္ က်ံဳ႕ကံ်ဳ႕ထိုင္လွ်က္ လည္းေကာင္း ခါးကို မေတာင့္လြန္း၊ မေလ်ာ့မကုန္းလြန္းဘဲ အလိုက္သင့္သလို တာရွည္ထိုင္ႏုိင္ေအာင္ ထားပါ။
ႏွာသီး၀အဖ်ားတြင္ ထြက္ေလ၀င္ေလတို႔၏ ထိခတ္တိုးေ၀ွ႕ရာ (ဖုသန႒ာန၊ နာသိက ကသိဏ)အရပ္ကေလးကို အသာအယာ သတိကပ္၍ ရွာေဖြရမည္။ ေတြ႕ရွိပါက ယခု လႈပ္သြားသည္မွာ ထြက္ေလေၾကာင့္ဟု သိလွ်င္ လႈပ္သည္သိသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ထြက္ေလဟု သိမွတ္ထားပါ။
တစ္ဖန္ ၀င္ေလေၾကာင့္ လႈပ္သြားေသာအခါတြင္လည္း ၀င္ေလဟု မွတ္လိုက္ျခင္းသည္ အာနာပါနကမၼ႒ာန္း တရား အားထုတ္သည္ မည္ပါေတာ့သည္။ အာနာပါနကမၼ႒ာန္းကို အားထုတ္တုိင္း အားထုတ္တုိင္း တစ္ၾကိမ္ထိုင္လွ်င္ အနည္းဆံုး (၁၅) မိနစ္ခန္႔ တရားထိုင္ပါ။
“ထြက္သက္ေလကို တိုတိုထုတ္ေသာေယာဂီပုဂၢိဳလ္သည္ တိုတိုထုတ္သည္ ဟု ေကာင္းစြာ သိ၏။ ၀င္သက္ေလကို တိုတို႐ႈ႐ႈိက္ေသာေယာဂီပုဂၢိဳလ္သည္ တိုတို႐ႈ႐ႈိက္သည္ဟု ေကာင္းစြာ သိ၏” (ဤကား ဒုမွာ တုိ ႐ွည္သိ အစီအစဥ္ျဖစ္ပါသည္)
“အလံုးစံုေသာ ထြက္သက္၀င္သက္တုိ႔၏ အစ၊ အလယ္၊ အဆံုး သံုးပါးလံုးကို ထင္ရွားေစလွ်က္ (ခႏၶာကိုယ္တစ္ခုလံုးကို ထိန္လင္းေစလွ်က္) ထြက္သက္ေလ ကို ထုတ္၏။ ၀င္သက္ေလကို ႐ႈိက္႐ႈ၏” (ဤကား သံုးခ်က္သိမွာ တတိယာ သို႔မဟုတ္ လံုးစံုလင္းရာ တ-၌သာ အစီအစဥ္ ျဖစ္ပါသည္)
“ရံခါအတြင္း၌ ထြက္ေလ၀င္ေလဟူေသာ ကာယ သို႔မဟုတ္ ပဋိဘာဂျဖစ္ေသာ အႆာသပႆာသကာယကို အဖန္တလဲလဲ ႐ႈမွတ္ပြားမ်ားအားထုတ္ရမည္။ ရံခါအျပင္၌ (အျပင္ကို ထုတ္၍) ထြက္ေလ၀င္ေလဟူေသာ ကာယ သို႔မဟုတ္ ပဋိဘာဂျဖစ္ေသာ အႆာသပႆာသကာယကို အဖန္တလဲလဲ ႐ႈမွတ္ပြားမ်ား အားထုတ္ရမည္။ ရံခါအတြင္းအျပင္ ႏွစ္ဌာနလံုး၌ ထြက္ေလ၀င္ေလဟူေသာ ကာယ သို႔မဟုတ္ ပဋိဘာဂျဖစ္ေသာ အႆာသပႆာသကာယကို အဖန္တလဲလဲ ႐ႈမွတ္ပြားမ်ားအားထုတ္ရမည္။” (ဤသည္မွာ အာနာပါနသမထ ေလးဆင့္ လံုးကို ေပါင္း၍ေဟာထားျခင္းျဖစ္ပါသည္)
အထက္ပါ ေဖာ္ျပခ်က္မွာ သတိပ႒ာနသုတ္ေတာ္ တြင္ ျမတ္စြာဘုရား ရွင္ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ အာနာပါနက်င့္စဥ္ အစီအစဥ္ ျဖစ္ပါသည္။
သမထဆုိတာ တေနရာတည္းကုိ စုိက္ရွဳတာပါ၊ ၀ိပႆနာဆုိတာ ခႏၶာကုိယ္ တခုလုံး ကုိ ျဖန္႔္ရွဴတာလုိ႔ ေျမဇင္းဆရာေတာ္ၾကီးက မိန္႔ေတာ္မူပါတယ။္ သမထယာနိကသမားအတြက္ စတုတၳအဆင့္က်င့္စဥ္မွာ ပဋိဘာဂ အလင္းနိမိတ္ရရွိၿပီး ဥပစာဆိုက္သြားျပီဆုိရင္္ ၀ိပႆနာကို စတင္အား ထုတ္ရႈမွတ္ႏိုင္ပါတယ္။
၀ိပႆနာရႈမွတ္ရာတြင္ ရုပ္ကို ရႈမွတ္ရမွာလား၊ နာမ္ကို ရႈမွတ္ရမွလား လုိ႔ ေမးစရာ ရွိပါတယ္။ စာေပမွာေတာ့ သမထယာနိကလမ္းစဥ္နဲ႔ အားထုတ္သူမ်ားအတြက္ နာမ္ကို ရႈမွတ္ပြားမ်ားရမယ္္လုိ႔ု ဆိုပါတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ သမထ အားထုတ္မႈ အားေကာင္း၍ သမာဓိရင့္သန္ေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ပါ္။ ၀ိိပႆနာသက္သက္ရႈမွတ္ ပြားမ်ားသူမ်ားသူေတြကုိေတာ့ ရုပ္ကို ရႈမွတ္ဖို႔ တိုက္တြန္းထားပါတယ္္။
(၂) ေျခဖ်ား မွ ခ်က္ ၊ ခ်က္မွ လည္မ်ိဳ လည္မ်ိဳမွ ငယ္ထိပ္ ထိ သုံးပုိင္း ပုိင္း၍ အျပန္ျပန္ အလွန္လွန္ ရွဳမွတ္ျခင္း။
(၂) မိမိခႏၶာကုိယ္ရဲ့ငယ္ထိပ္ေျခေတာက္လက္စတဲ့ ေန ရာေတြမွာ တဖြားဖြား ျဖစ္ပ်က္ေန တာေတြကုိမွတ္ျခင္း
အားလုံးေသာ သတၱ၀ါေတြ ၀င္ေလ တစ္ခ်က္… ခ်မ္းသာၾကပါေစ ထြက္ေလ တစ္ခ်က္. ဒီပုံစံနဲ႔ ေမတၱာ ဘာ၀နာ ပြားမ်ား ႏိုင္ပါတယ္… ကုိယ္ ပြားမ်ား ခ်င္တဲ့ ပုံစံနဲ႔ ပြားမ်ား ႏိုင္ပါတယ္ ၀င္ေလ ထြက္ေလ ကပ္ျပီး ပြားမ်ား တာက သမာဓိ ပုိရ လြယ္ပါတယ္။
တစ္ေန႔ ေသရမွာ ပါတကား တစ္ေန႔ ေသရမွာပါ တကားလုိ႔ ဉာဏ္ကေန ျမင္လာေအာင္ ဉာဏ္မွာ ထင္လာေအာင္ ဆင္ျခင္ရပါမယ္။
ေန႔စဥ္ (၁၅) မိနစ္ခန္႔ ဝိပႆနာျမတ္တရားအား က်င့္ၾကံပြားမ်ား အားထုတ္ႏိုင္ၾကပါေစ။
ထူးခြားသော အကျိုးကျေးဇူး ကံကောင်းမှုတွေ အမြန် ရောက်ရှိလာမည့် ၁၅ မိနစ် တရားထိုင်နည်း
တနေ့လျှင် (၁၅) မိနစ်ခန့် တရားထိုင်ကြည့်ပါ။ ထူးခြားသော အကျိုးကျေးဇူးများ၊ ထူးခြားသော ကံကောင်းမှုများ သင့်ထံသို့ ဧကန်အမြန် ရောက်ရှိလာပေလိမ့်မည့်
အမျိုးသားယောဂီများမှာ တင်ပလ္လင်ခွေထိုင်လျှက်လည်းကောင်း၊ အမျိုးသမီးယောဂီများမှာ မိန်းမထိုင် ကျုံ့ကျုံ့ထိုင်လျှက် လည်းကောင်း ခါးကို မတောင့်လွန်း၊ မလျော့မကုန်းလွန်းဘဲ အလိုက်သင့်သလို တာရှည်ထိုင်နိုင်အောင် ထားပါ။
နှာသီးဝအဖျားတွင် ထွက်လေဝင်လေတို့၏ ထိခတ်တိုးဝှေ့ရာ (ဖုသနဋ္ဌာန၊ နာသိက ကသိဏ)အရပ်ကလေးကို အသာအယာ သတိကပ်၍ ရှာဖွေရမည်။ တွေ့ရှိပါက ယခု လှုပ်သွားသည်မှာ ထွက်လေကြောင့်ဟု သိလျှင် လှုပ်သည်သိသည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် ထွက်လေဟု သိမှတ်ထားပါ။
တစ်ဖန် ဝင်လေကြောင့် လှုပ်သွားသောအခါတွင်လည်း ဝင်လေဟု မှတ်လိုက်ခြင်းသည် အာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်း တရား အားထုတ်သည် မည်ပါတော့သည်။ အာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းကို အားထုတ်တိုင်း အားထုတ်တိုင်း တစ်ကြိမ်ထိုင်လျှင် အနည်းဆုံး (၁၅) မိနစ်ခန့် တရားထိုင်ပါ။
“အာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းကို အားထုတ်သော ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည် သတိကပ်၍သာလျှင် ထွက်သက်ကို ဖြစ်စေ၏။ ထွက်သက်ကို ထုတ်၏။ သတိကပ်၍သာလျှင် ဝင်သက်ကို ဖြစ်စေ၏။ ဝင်သက်ကို ရှိုက်ရှူ၏” (ဤကား သတိမြဲရာ ပထမာ အစီအစဉ်ဖြစ်ပါသည်)
“ထွက်သက်လေကို တိုတိုထုတ်သောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည် တိုတိုထုတ်သည် ဟု ကောင်းစွာ သိ၏။ ဝင်သက်လေကို တိုတိုရှုရှိုက်သောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည် တိုတိုရှုရှိုက်သည်ဟု ကောင်းစွာ သိ၏” (ဤကား ဒုမှာ တို ရှည်သိ အစီအစဉ်ဖြစ်ပါသည်)
“အလုံးစုံသော ထွက်သက်ဝင်သက်တို့၏ အစ၊ အလယ်၊ အဆုံး သုံးပါးလုံးကို ထင်ရှားစေလျှက် (ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကို ထိန်လင်းစေလျှက်) ထွက်သက်လေ ကို ထုတ်၏။ ဝင်သက်လေကို ရှိုက်ရှု၏” (ဤကား သုံးချက်သိမှာ တတိယာ သို့မဟုတ် လုံးစုံလင်းရာ တ-၌သာ အစီအစဉ် ဖြစ်ပါသည်)
“အရှိုက်အရှုပြင်းသောကြောင့် ရုန့်ရင်းကြမ်းတမ်းသော ထွက်သက်၊ ဝင်သက်လေတို့ကို ငြိမ်းအေးစေလျှက်၊ ချုပ်ပျောက်စေလျှက် ထွက်လေကို ထုတ်မည်၊ ဝင်လေကို ရှုရှိုက်မည်ဟု ကျင့်၏” (ဤကား စ-မှာ ငြိမ်းစေဘိ အစီအစဉ်ဖြစ်ပါသည်)
“ထွက်သက်လေ၊ ဝင်သက်လေဟူသော ကာယ၌ ဖြစ်ခြင်းသဘောကို အဖန်တလဲလဲ ရှုမှတ်၍ နေရာ၏။ ထွက်သက်လေ၊ ဝင်သက်လေဟူသော ကာယ၌ ပျက်ခြင်းသဘောကို အဖန်တလဲလဲ ရှုမှတ်၍လည်း နေရာ၏။ ထွက်သက်လေ၊ ဝင်သက်လေဟူသော ကာယ၌ ဖြစ်ခြင်း၊ ပျက်ခြင်းသဘောကို အဖန်တလဲလဲ ရှုမှတ်၍လည်း နေရာ၏။” (ဤကား အာနာပါနသမထကို အဦးမူ၍ ၀ိပဿနာရှုမှတ်ပွားများရပုံ ဖြစ်ပါသည်)
“ထိုကဲ့သို့ အားထုတ်နေသော ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အား သတိတရား ထင်မြဲလာတော့သည်။ ထိုသတိ၏ သောတာပတ္တိမဂ်ဉာဏ်ကို ရခြင်းငှါ၊ အဆင့်ဆင့် ရင့်ကျက်ခြင်းငှါ ဖြစ်လာလျှင် ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည် တဏှာ၊ ဒိဋ္ဌိနှစ်ပါးကို အမှီသဟဲပြုစရာမလိုဘဲ နေနိုင်စွမ်းရှိလာတော့သည်။ ထိုအခါ တစ်လောကလုံးတွင် သို့မဟုတ် ခန္ဓာငါးပါးဟူသော လောကတွင် `ငါ့ကိုယ်´ဟူ၍လည်းကောင်း၊ `ငါ၏ဥစ္စာ´ဟူ၍လည်းကောင်း တစ်စုံတစ်ခုကိုမျှ စွဲလမ်းခြင်းမရှိ အတ္တဒိဋ္ဌိပြုတ်လေတော့သည်” (ဤကား အာနာပါနသမထကို အဦးမူ၍ ၀ိပဿနာရှုမှတ်ပွားများ အားထုတ်သော ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အား မဂ်ဖိုလ်ရ၍ အရိယာဖြစ်ပုံကို ပြပါသည်။)
အထက်ပါ ဖော်ပြချက်မှာ သတိပဋ္ဌာနသုတ်တော် တွင် မြတ်စွာဘုရား ရှင်ဟောကြားတော်မူသော အာနာပါနကျင့်စဉ် အစီအစဉ် ဖြစ်ပါသည်။
သမထဆိုတာ တနေရာတည်းကို စိုက်ရှုတာပါ၊ ၀ိပဿနာဆိုတာ ခန္ဓာကိုယ် တခုလုံး ကို ဖြန့််ရှူတာလို့ မြေဇင်းဆရာတော်ကြီးက မိန့်တော်မူပါတယ။် သမထယာနိကသမားအတွက် စတုတ္ထအဆင့်ကျင့်စဉ်မှာ ပဋိဘာဂ အလင်းနိမိတ်ရရှိပြီး ဥပစာဆိုက်သွားပြီဆိုရင်် ၀ိပဿနာကို စတင်အား ထုတ်ရှုမှတ်နိုင်ပါတယ်။
၀ိပဿနာရှုမှတ်ရာတွင် ရုပ်ကို ရှုမှတ်ရမှာလား၊ နာမ်ကို ရှုမှတ်ရမှလား လို့ မေးစရာ ရှိပါတယ်။ စာပေမှာတော့ သမထယာနိကလမ်းစဉ်နဲ့ အားထုတ်သူများအတွက် နာမ်ကို ရှုမှတ်ပွားများရမယ််လို့ု ဆိုပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သမထ အားထုတ်မှု အားကောင်း၍ သမာဓိရင့်သန်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါ်။ ၀ိိပဿနာသက်သက်ရှုမှတ် ပွားများသူများသူတွေကိုတော့ ရုပ်ကို ရှုမှတ်ဖို့ တိုက်တွန်းထားပါတယ််။
အားလုံးသော သတ္တဝါတွေ ဝင်လေ တစ်ချက်… ချမ်းသာကြပါစေ ထွက်လေ တစ်ချက်. ဒီပုံစံနဲ့ မေတ္တာ ဘာဝနာ ပွားများ နိုင်ပါတယ်… ကိုယ် ပွားများ ချင်တဲ့ ပုံစံနဲ့ ပွားများ နိုင်ပါတယ် ဝင်လေ ထွက်လေ ကပ်ပြီး ပွားများ တာက သမာဓိ ပိုရ လွယ်ပါတယ်။
တစ်နေ့ သေရမှာ ပါတကား တစ်နေ့ သေရမှာပါ တကားလို့ ဉာဏ်ကနေ မြင်လာအောင် ဉာဏ်မှာ ထင်လာအောင် ဆင်ခြင်ရပါမယ်။
ဒုတိယ.. ခါးကနေ ပုခုံးအထိ ခန္ဓာကိုယ် အလယ်ပိုင်းကို စိတ်နဲ့ကြည့်ပြီး ငါ့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ဟာ စက်ဆုပ် စရာကြီး ပါတကားလို့ စိ်တ်က ဆင်ခြင် ပွားများပြီး အတွင်းပိုင်း အူတွေ အသည်းတွေ ကျောက်ကပ်တွေ တစ်ပုံစီ တစ်ပုံစီ မြင်အောင် ကြိုစားပွားများပါ။
နေ့စဉ် (၁၅) မိနစ်ခန့် ဝိပဿနာမြတ်တရားအား ကျင့်ကြံပွားများ အားထုတ်နိုင်ကြပါစေ။